Istaraatijiyad Cajiib ah Talooyin Ku Saabsan Talooyinka Ganacsiga ee Ganacsi si aad u kiciso Ololahaaga Suuqa
Ma aha qalad in la yidhaahdo Twitter waa mid ka mid ah qalabka ugu caansan uguna yaab leh ee ganacsatada si ay u kobciyaan joogitaankooda online. Waxay ka caawisaa iyaga inay dhisto website-yadooda oo ay kordhiyaan isticmaalka isticmaalkooda inta badan.
Inkastoo ay jiraan talooyin ganacsi oo kala duwan, Frank Abagnale, khabiirka ugu horreeya ee ka socda Semalt , waxay ku xiran yihiin suuq-geynta bulshada ee guuleysta waxayna hubaal ku siin doonaan faa'iidooyin badan
Inuu kordho Saaritaankaaga Ganacsigaaga Twitter
Waxay noqotey mid lagama maarmaan u ah dhammaan ganacsatada in ay wax ka qabtaan howlahooda Twitter. Waa inaad abuurto xayeysiiska Twitter-ka oo u dhaqmaan sida xirfadle haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol-maalmeedka nolosha - curso fotografia publicitaria mexico. Calaamadeynta macnaheedu waa inaad ku dari doontaa magac caan ah si aad u qorto boggaaga Twitter. Waqtigaas, waxay noqotay qayb muhiim ah, iyo badbaadada ganacsi waxay ku xiran tahay sida ugu wanaagsan ee laguu soo bandhigo internetka. Geeddi-socodka oo dhan wuxuu ku billaabmayaa bio sax ah. Haa, waa inaad ku qortaa bio wanaagsan oo leh 160 karoon boggaaga Twitter-ka haddii aad halis u tahay wax qabad iyo ganacsigaaga internetka.
Isticmaal Istaraatiijiyada Mawduucaaga
Waa qasab inay qaadato waqti ayna abuurto qorshooyinka miisaaniyadda ee Twitter. Waxaad dhisi kartaa ganacsigaaga haddii aad daryeesho tilmaamaha warbaahinta bulshada oo u ogolow waxyaabaha aad ka dhigto inay noqoto mid hal abuur leh oo xiiso leh..Dhammaan tani waxay suurtogal noqon kartaa oo kaliya marka aad dhistay istaraatiijiyada mawduucaaga. Waa inaad sameysaa content-saaxiibtinimo iyo mid ka hadlaya ganacsigaaga si habboon. Dooro mawduucyo isbeddel ah iyo keywords keywords ee warshadaha si loo soo jiito dad badan oo dad ah. Waxaa intaa dheer, waa inaad diirada saartaa inaad qiime u yeelatid dhagaystayaashaada. Waa daruuri ah dhammaan isticmaalayaasha Twitter iyo kuwa sameeya ganacsi.
Waa inaad isticmaashaa yoogyeelada si aad u ballaariso baaxadda mawduucaaga. Ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala Twitter waxay isticmaalaan ishtags si ay ula xiriiraan dadka ay khusayso oo ay la falgalaan dad badan oo ka baxsan. Waa inaad doorataa liistada adigoo ku saleynaya dhageystayaashaada iyo dabeecada bogga. Waxyaabaha aad u baahday ee aad gelisey, waxa fiican in natiijada ay noqon doonto Twitter.
Kobciyaan oo mashquuliso raacayaashaada
Suuq-geynta warbaahinta warbaahinta bulshada waxaa loo tixgeliyaa guulo kaliya markaad koreyso oo aad ku hawlanaato dadka raacsan bilaha bilaha kadib. Hubi in taageerayaashaada Twitter aysan caajisneyn ama daalanayn sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad si aan sax ahayn kuugu fashilmin. Waa in aad dadka kale ku dhiirrigeliso inay kula xiriiraan oo ay qof waliba ku lug yeeshaan wadahadalo maalin kasta ah. Taasi waxay kordhin doontaa tiradeada taageerayaasha Twitter iyo badanaa ganacsigaaga.
Cabbirtaada Natiijadaada iyo Dib u Dhigista Dadaaladaada
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waa inaad qiyaastaa natiijooyinkaaga oo aad ku nadiifisaa dadaalka hal mar toddobaadkii. Tani, waxaad isticmaali kartaa aaladaha Twitter sida Trtrland, Twitalyzer, iyo TweetReach. Dhammaan qalabkan ayaa kuu fududeynaya inaad cabirto dadaalkaaga marketing ee Twitter. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka, waxaad abuuri kartaa warbixino iyo tilmaamid istaraatiijiyado ay ku fiicnaadeen ganacsigaaga. Sii xeeladahaas qayb ka mid ah ganacsigaaga oo ka takhalus kuwa kuwa ganacsigaaga siiyay faa'iido la'aan